ओली र प्रचण्डको सरप्राइज, भोली नै पार्टी एकता ! « Light Nepal
ओली र प्रचण्डको सरप्राइज, भोली नै पार्टी एकता !
Published On : 16 May, 2018 3:38 pm
काठमाडौं, २ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भयो । बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताले संभवत भोली नै पार्टी एकता गर्नै मोटामोटी सहमति भएको छ ।